RC Cars KOOWHEEL 1:16 n'ọtụtụ 2WD Off Road Remote Control Cars na 2 rechargeable Battery 2.4GHz Radio Remote Control Truck Monster High Speed ​​crawler USB chaja RC Car maka okenye na ụmụaka (Blue) - Jomo Technology Co., Ltd
RC Cars KOOWHEEL 1:16 n'ọtụtụ 2WD Off Road Remote Control Cars na 2 rechargeable Battery 2.4GHz Radio Remote Control Truck Monster High Speed ​​crawler USB chaja RC Car maka okenye na ụmụaka (Blue)
Key Product Akụkụ:
Echiche Ziri Ezi Desert adọkpụ:
1:16 n'ọtụtụ, Independent nkwusioru, niile teren na gị akara, a RC ime akara ụgbọ ala ikwe maka ịkpọ osimiri, ájá, ahịhịa ma na ebe ọ bụla ị ga-amasị.
Strong mgbochi ndabichi nke nwee multiple ụgbọala ọduọ zukọrọ n'otu oge na ebe. Ọ bụrụ na ị na-2 ọzọ KOOWHEEL RC ụgbọala, ọ bụ ndị ọzọ fun na-agba ọsọ ọtụtụ ime akara ụgbọala akụkụ site n'akụkụ.
Ugboro abụọ Oge abụọ Fun:
Koowheel ụgbọala bịa na 2, batrị, nwere ike na-akwado ike maka engine iru n'elu ọsọ nke 12 mph. The zuru batrị nwere ike efehe 10-15 mins. Recharging batrị site na USB n'ọdụ ụgbọ mmiri, ihe niile ị chọrọ ka malitere 3 AA batrị maka transmitter!
Full ọrụ akara, na-atụ / laa azu / ekpe / nri. Nke a ime akara Car nwere ukwuu mụ n'iru na trotul, na ergonomic remote nwere ike hụ na elu akara maka mbido.
KOOWHEEL enye zuru nkwụghachi ma ọ bụ ịgbanwe ọhụrụ otu maka iji n'ime ụbọchị 30. Free ịrụzi na dochie ngwa na US maka iji n'ime 365 ụbọchị. Njikere omume na 24 awa. NTRE tinye na ụgbọ ibu UGBU A!
2.4G ime akara CAR2.4 GHz radio akara: ike mgbochi ndabichi nke nwee multiple ụgbọala ọduọ zukọrọ n'otu oge na ebe. Ọ bụrụ na ị na-2 ọzọ KOOWHEEL RC ụgbọala, ọ bụ ndị ọzọ fun na-agba ọsọ ọtụtụ ụgbọala akụkụ site n'akụkụ.
Biko mara: 3 reasons below for short-driving-time of the battery :
The odori oge bụ mkpụmkpụ ịkwado a egwuregwu.
Ị dịghị agba ọsọ nke batrị tupu odori.
The ndụ batrị ga-ebelata ma ọ bụrụ na unu na-adịghị wepụrụ batrị si ụgbọ ala mgbe eji.
RC ụgbọ ala x1
rechargeable 6.4V / 700mAh batrị maka Car X2
USB chaja x1
Previous: Koowheel K3 6.5 inch Electric Hoverboard na Bluetooth Self adịzi Scooters maka Adult Kids
Next: RC Cars maka Kids KOOWHEEL Remote Control Car 360 n'usoro 4WD Off Road abụọ kwadoro n'usoro tumbling - 2.4Ghz High Speed ​​Rock crawler Vehicle na nnukwu ọkụ Children Birthday Onyinye RC Car maka Kids
The kacha mma ejiji mini ike-aka ụmụaka electri ...
Koowheel Nanị Patent 8 inch Electric scoot ...
Koowheel electric onwe adịzi skuuta si efegharị ...
Koowheel L10-X 2019 otutu 8 inch Lightweig ...
Koowheel Cool Mini Skateboard Power-aka El ...